Spain By tareenka: Sidee in laga iibiyo Tikidhada Oo More | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Spain By tareenka: Sidee in laga iibiyo Tikidhada Oo More
Haddii aad leedahay laba toddobaad si ay ugu bixinwaydeen Spain, mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ku wareegsan hesho waa inay sahamiyaan Spain by tareenka. Ma aha oo kaliya this ogolaan doonaa inaad si ay u arkaan qaar ka mid ah indhaha cajiib ah oo wadanka ku, laakiin safarka tareenka ee Spain waa mid aad u hufan oo fudud. Qaybta ugu adkaa waa la iibsan tigidhada tareenka. Habka ugu fiican si ay u iibsadaan aad tigidhada tareenka si aad ugu safarto Spain tareen waa khadka tooska ah. Waxaa jira dhowr degel oo kuu oggolaanaya inaad tan sameyso. muhiimka ah waa in la helo mid adiga kuu fiican marka la eego fududaato in la isticmaalo, afka, iyo miisaaniyadda. Gadashada tigidhada aad hore kuu ogolaanaya in aad qaadato Faa'iidada ee heerka khaas ah iyo sidoo kale in la hubiyo inaad hesho gal tareenada aad rabto in aad ka hor inta aysan si buuxda jaale.
Horey u qorshee oo tikidhadaada horay u sii dalbo si aad u hesho ugu fiican ee soo baxay safarka tareenka aad. Eegno this labo isbuuc faahfaahin ee u socdaalaya agagaarka Spain by tareenka. Tanu waa hage loogu talagalay safarkaaga soo socda.
Our Spain ugu horeysay by tareenka waa Madrid (Maalmaha 1- 3)
Tani waa caasimada Spain oo ay tahay isku darka wanaagsan ee labada jir ah oo cusub, la beeraha xarrago, shopping cajiib ah, vibey cawayska iyo dabcan meesha Malasana ah. Madrid ayaa sidoo kale hoy u tahay dhowr ah oo matxafyada top Spain ee. Shuqullo badan oo guriga caalamku aqoonsan yahay. Maxaa yeelay, waxaa aad u badan in ay sameeyaan magaalada si aad 3 maalmood ayaa halkaan joogi doonaa sidoo kale-qaatay. Waa bilow fiican ah in aad labo todobaad safar iyo fududahay si aad u hesho tareen in meel halkan ka. Madrid Atocha waa xarunta tareenka ee Renfe ee shirkadda tareenka rasmiga ah ay gaarto, sidoo kale rugtan tareenka ayaa ka mid ah kuwa ugu quruxda badan tareenada ee Spain.
San Sebastian (Maalmaha 3 - 5)
Tani magaalada yar quruxda badan waa in Spain ee Basque Country oo waa xaq on the Bay ee Biscay. Waxay bixisaa labada xeebaha iyo buuraha oo heli dareenka oo dhan inta lagu jiro maalinta, laakiin kolkii habeenkii yimaado waa dhan oo ku saabsan Town Old meesha aad ku raaxaysan kartaa daraasiin baararka pintxo for suxuunta qaniinyada-size jeclaadaanna noqon doonaa. Ha ka maqnaan fiidkii socod ah oo ay la socdaan xilbaa de la Concha dhamaanayey pintxos oo magaalada Old. Helitaanka in San Sebastian la Spain by tareenka waa u fududahay sida ay jiraan ugu yaraan afar tareenada maalin kasta ka Madrid.
Pamplona (Maalmaha 5 – 6)
magaalada Tani waa guriga of muran ah Orodka ee Bulls ah kaas oo dhaca bisha July sanad walba, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah si Pamplona ka badan this. Waxaa ku yaal buur ku taal gobolka Navarre ah taas oo macnaheedu yahay waxaa jira views cajiib ah oo ka mid ah buuro iyo dooxooyin hoos ku. Magaalada uu yahay mid yar taasoo u fududaynaysa in uu socsocdo, oo waxay qaadan naqshadaha u qurux badan oo taariikhda. Waxaa jira baarar firfircoon iyo muuqaallo tapas ah sannadka oo dhan. Ha ka maqnaan socod dhex Town Old ka ama dib loo raacin wadada qaaday inta lagu jiro Orodka ee Bulls ah. Ugu dambeyntii, magaaladan ayaa sidoo kale si fudud loo heli karo San Sebastian oo gaaban tareen kortaan iska.
Spain by tareenka – Barcelona Tareen (Maalmaha 6 - 9)
Magaaladan badweynta ah waa inay noqotaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna caansan Spain, iyo ma waxa aanu niyad jabin! Haddii aad raadinayso Fanka iyo Suugaanta, naqshadaha, maalmood caajis ku saabsan xeebta, xafladaha habeenkii oo dhan, ama kaliya sahaminta magaalo cusub, jiraan wax qof walba ee Barcelona. Ha ka maqnaan Familia Sagrada ah, taas oo ah mid ka mid ah qaababka ugu riwaayado dunida casriga ah ee. Spain by Tareen bixisaa tareenada noqnoqda ka Pamplona inay Barcelona oo waxaa jira oo kaliya a afar-saac safarka u dhexeeya labada magaalo.
Valencia (Maalmaha 9 - 10)
Kaliya Spain gaaban by Tareen kortaan ka Barcelona, Valencia waxaa inta badan looma eego by dalxiisayaasha. magaaladan yar badan si ay u siiyaan iyo waxa ay si fiican mudantahay in maalin si loo baadho yara. Waa magaalo qurux badan in ay socdaan iyada oo uu leeyahay gudubno cajiib ah iyo socda, xusus. Waayo, kuwa raadinaya wax ka badan nasashada jiro xulashada ballaaran oo xeebaha iyo Albufera Park. Ha ka maqnaan socod, ordo ama wareegga marayo Gardens Turia ah – mid ka mid ah beeraha ugu weyn magaalooyinka Spain. Waxaa jira dhowr tareenada in maalin walba ay maamulaan ka Barcelona in Valencia.
Isku dareento Mediterranean la dhaqanka ah farshaxanka casriga ah iyo horumarinta waa suurto gal marka aad safarka Spain by tareenka, Malaga waxaa laga heli karaa Spain ee koonfurta Costa del Sol. Bartamaha magaalada ayaa dib loo soo celiyay oo isku daray a Kaniisadda Gothic iyo cidhiidhiga waddooyinka dadka lugta leh ee dhexe baararka iyo makhaayadaha hip casri ah. Malaga ayaa qaar ka mid ah xeebaha dhab ah oo cajiib ah in ay soo booqdaan oo buuraha muuqaal dabiici ah waxa ku xeeran. Ha ka maqnaan fuulitaanka in Gibralfaro ah Castle si aad u hesho aragtiyo neef-qaadasho leh oo ku aaddan qorrax-dhaca Andalus-ka iyo magaalada. Waxaa jira tareenada maalin walba socda ka Valencia si Malaga.
Seville – mid ka mid ah liiska ugu dambeeya ee naga of Spain by tareenka
Seville waa keliya masaafo dhow tareen ka Malaga iyo sidii cajiib ah. Bal dib u fikir boqortooyadii Roomaanka si aad u hesho fikrad ah u fiiriyaan iyo dareemayaa magaalada this in isku daraa waxyaalaha aasaaska ah ee muddooyinka badan oo taariikhi ah. Waxaa jira badan oo la sameeyo in magaalada, ka sahaminta magaalada Baadi weheliyaan quarter Arenal ah webi in booqanaya makhaayadaha heer sare ama daawashada dagaal dibi ah ee giraanta taariikheed ee magaalada. Ha ka maqnaan booqasho uu ku Cathedral Seville iyo Alcázar, kaas oo loo adeegsan jiray in lagu duubo muuqaalada barnaamijkii TV -ga ee la daawaday Game of Thrones. Tareenadu ordi maalin ka Malaga si Seville iyo Seville ay dib ugu Madrid halkaas oo garoonka diyaaradaha caalamiga ah waa.
Tani faahfaahin labo isbuuc kaa caawin doona inaad samayso faa'iidada ugu badan ee safarkaaga iyo sahamiyaan Spain by tareenka. Talooyin Our on tigidhada tareenka jaale Hubi in aad awoodo si aad u hesho meesha aad rabto inaad u tagto iyo in aad fasax ka waddaa si habsami leh si aad naftaada ku raaxaysan karaan ka dhigi doonaa. Ka dib oo dhan, taasi waxa fasaxa yihiin, waayo,!
Hadaad ubaahantahay mid kale Tigidhada Yurub tareenka, riix halkan oo waxaad u tagtaan our website oo wuxuu ku raaxaysan safarka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / es si / de ama / ru iyo luuqado badan.
tareenada tareen safarka travelspain